स्वार्थ मिल्दासम्म नेकपा विभाजित हुँदैन « Postpati – News For All
बेद बोहरा पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट
नेकपा कोष्ठ भित्रको नेकपा अहिले फुटको संघारमा पुगेको धेरैको विश्लेषण छ । कुन आधारमा एकतामा गए अनि कुन आधारमा बिभाजित हुने हो ? हुन त यिनिहरुले न कुनै सैद्धान्तिक रुपान्तरणको लागि एकता गरेका थिए, न त एकताको लागि पुर्बबत रुपमा सिद्धान्त नै मिल्थ्यो ।
एकता त गरे तर त्यो एकताको जग स्वार्थको धरातलमा टेकेको थियो । स्वार्थ मिलेसम्म यिनिहरु फुटेर जाने छनक छैन । स्वार्थमा ठेस लाग्न आट्यो भने एकअर्कालाई धम्की दिएर बार्गेनिङसम्म गरेको ईतिहास ताजै छ । त्यसरी पनि भएन भने पार्टी फुटाउनलाई यिनिहरुलाई कुनै आइतबारको जरुरत हुनेछैन । यिनिहरुलाई न नागरिकको चिन्ता छ, न आफू मरेर बचाउने कार्यकर्ताकै चिन्ता छ ।
पहिले माओकी श्रीमतिको बिषयमा बहस गरेर नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी फुटाउने चलन थियो । लेनिन उत्तरबाट दक्षिण मार्च पास गर्नु हुन्थ्यो कि दक्षिणबाट उत्तर भन्नेमा नेपाली पार्टी फुटेका हुन । माओबाद कि माओ बिचार भन्नेमा पनि पानी बाराबार भएकै हो । रसियन कम्युनिष्ट कि चाइनिज कम्युनिष्टमा पनि बाझाबाझ गरेकै हुन । यस्तै दृष्टान्तहरु भएकाले कम्युनिष्ट पार्टीमा बहस र असन्तुष्टी देखिने बित्तिकै पार्टी फुट्ने भो भनेर ब्यापक चर्चा हुने गर्छ । कांग्रेसमा चाहिँ छुट्टाछुट्टै बैठक बसेपनि, महिनौ बैठक बहिस्कार गरेपनि फुट्ने हल्ला हुँदैन ।
यसै भएर बिबाद देखिने बित्तिकै पार्टी फुट्छकी भनेर केही राजनीतिक नेताहरु पनि तिलमिलाएको देखिन्छ । तर पार्टी कसैको चाहनाले फुट्दैन । फुट्ने धरातल तयार हुनु पर्छ ।
अंश लिएर बाउसंग छुट्टीनेले आफु छुट्टै बस्ने घर बनाउन सक्छु, आफु राम्रै घर बनाएर बस्छु, मीठो मीठो खान्छु भन्ने आँट नभएसम्म, त्यस्तो सम्भावना नभएसम्म सडकछाप हुन बाउसंग जति झगडा गरेपनि अँश लिएर छुट्टिने आँट कुनै छोरोले गर्दैन, बरु चुमुर्किएर बाउसंगै बस्नुपर्छ ।
पार्टी फुट्छ भन्नेहरुले कुन राजनीतिक आधार र धरातलमा भनेका हुन म जान्दिन । जसले जतिसुकै पाखुरा सुर्किएपनि मैले चाहिँ पार्टी फुट्ने कुनै आधार र बाटो देख्दिन र छैन ।
यहाँ केबल एकले अर्कोलाइ गलाउन सकिन्छकी भन्ने प्रयास मात्रै हुदैछ जुन कुरा गल्नु पर्छ भनिनेलाइ झन धेरै थाहा छ । कसैको कमजोरी देखाउन खोज्नेको झन धेरै कमजोरी थाहा छ ।
गल्नु किन, के का लागी ? त्यसैले न पार्टी फुट्छ, न सस्थापन गल्नु पर्ने वस्तुस्थिति र धरातल कायम छ ।
कसैलाई प्रमको संबैधानिक शक्तिको भागवन्डा चाहिएको छ, कसैलाइ बिना प्रतिस्पर्धा सम्झौतामा भविष्य सुनिस्चित गर्न सकिन्छ की भन्ने आशा छ । यी कुनै कुरा हुन सक्ने कुनै सम्भावना छैन । न त पार्टी फुटाएर हिड्नसक्ने तागत कसैसंग छ ।
संस्थापनले पार्टी फुटाउने भन्ने त दुनियामै नभएको कुरा, सिद्धान्तत पनि आवश्यक नभएको कुरा कसले गर्छ र ? त्यसैले जति बाँसुरी फुकेपनि, जति ढोल बजाएपनि, जति सनाइ फुकेपनि पार्टी फुट्दैन । यस्ता कल्पनामा चिन्ता र खुशी मान्नु बेकार कुरा हो ।
लेखक नेपाली जनप्रगतीशिल मोर्चा कतारका बरिस्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
२२ कार्तिक २०७७, शनिबार को दिन प्रकाशित